काठमाडौं उपत्यका ‘ब्ल्याक आउट’ को खतरा ! - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
काठमाडौं उपत्यका ‘ब्ल्याक आउट’ को खतरा !
फागुन २५, २०७४ 4843 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि कतिपय ठाउँमा यसको परिणाम शून्य देखिएको छ । यसको बलियो उदाहरण हो, १३२ केभी थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन ।
प्राधिकरणमात्र होइन सिंगो सरकारले जोड गर्दा पनि झन्डै डेढ दशकसम्म उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएको छैन । यही कारण आगामी डेढ/दुई वर्षभित्र उपत्यका ‘ब्ल्याक आउट’ हुने खतरा बढेको छ ।
काठमाडौं र भक्तपुर खण्डमा काम पूरा भए पनि ललितपुरको हरिसिद्धि, बुङमती, लामाटारमा दशकौंदेखिको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । स्थानीयले तारमुनिको जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दाबी गरेपछि निर्माण अलपत्र छ ।
बुङमती–लामाटार १२ किलोमिटरको काम डेढ दशकदेखि रोकिएको निवर्तमान आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले बताए । ‘बुङमती, चापागाउँ, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दै गएपछि मुआब्जा विवाद थप चर्किएको छ,’ उनले भने ।
प्रसारण लाइन फाउन्डेसनमा विवाद नरहेको र तारमुनिको जग्गाको २५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भएको उनले बताए । तर, स्थानीयले शतप्रतिशत पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रसारण लाइनअन्तर्गत मातातीर्थ र हरिसिद्धिमा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । जसअनुसार मातातीर्थको सबस्टेसन पूरा भएको छ । मुआब्जा विवादले हरिसिद्धि सबस्टेसन तथा अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन ।
प्रस्ताव गरिएको हरिसिद्धि सबस्टेसन दोस्रो हो । अग्रहरीका अनुसार सबस्टेसन निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रमा जबरजस्ती लोडसेडिङ गर्नुपर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यसले ललितपुरमा मात्र नभई सिंगो उपत्यकालाई असर गरेको छ ।
अहिले ललितपुरको विद्युत् र माग आपूर्तिको सन्तुलन तथा प्रणाली व्यवस्थापन लगनखेल सबस्टेसनले धानिरहेको छ । अझै केही समय लाइन पूरा नभए जिल्लामा ‘फोर्स ब्ल्याक आउट’ गर्नु पर्ने उनले बताए ।
हिउँदमा लगनखेल सबस्टेसन ओभर लोड हुँदा बानेश्वरमा लोड स्थानान्तरण गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ । यो उपायले सधैं काम गर्ने अवस्था छैन ।
स्थानीय अवरोध समाधान गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गर्दा पनि सफल हुन नसकेको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । अवरोध नहुने हो भने १ वर्षभित्र प्रसारण लाइनको काम पूरा हुन्छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिसमक्ष समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । जनप्रतिनिधिले समस्या समाधान गर्ने बचन दिए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । बढ्दो जनसंख्यासँगै विद्युत माग बढ्दै गएकाले चापागाउँमा समेत थप सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।